About Window Registery
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Window Registry » About Window Registery
1 registry အကြောင်းနည်းနည်းလေးပါ ... on 4th May 2009, 8:45 pm
registry အကြောင်းလေး ကို သိသလောက်က လေး ပြောပြတာပါ .. ကျွန်တော်ထက် သိတဲ့ လူတွေလည်း အများကြီးရှိမှာပါ .. အားလုံးလဲ registry ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဒီနေရာလေးမှာမျှဝေ ပေးကြပါလို့ ပြောပါရစေ .....
အောက်မှာ ရေးပြထားတာတွေကတော့ High level key(or) Sub key(or) Main key လို့ခေါ်ပါတယ်....သူ့အောက်မှာနောက်ထပ် Sub key တွေ ရှိပြီးတော့ အောက်ဆုံးအဆင့် မှာ Value တွေရှိပါတယ်။ Value တွေမှာလည်း Value name တွေ ရှိပြီးတော့ Assign လုပ်ထားတဲ့ Data & Data Type တွေရှိတယ်။
- ၄င်းသည် -HKEY_LOCAL_MACHINE ၏ Sub key နှစ်ခုဖြစ်သော Software & System မှData များကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပေးတယ်။
- လက်ရှိ Logon ၀င်ရောက်နေသော User ရဲ့ ID & Logon Screeen ကို တည်ဆောက်ရန်
- User အားလုံးရဲ့ Profile တွေကို သိမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်......
- -HKEY_CURRENT_USER သည် -HKEY_USERS ၏ Sub key တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်......
- O.S စတင်တက်ရန် လိုအပ်သော Device များ၊ Device Driver များနဲ့သက်ဆိုင်သော Data
များအပါအ၀င် ကွန်ပျူတာနဲ့သက်ဆိုင်သော Data Configuration များကိုပြပေးပါတယ်.......
- မတူညီသော User များ Logon ၀င်ရောက်နေစဉ်တွင် ၄င်း ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို
2 Registry ထဲမှာဘာတွေရှိသလှဲ ကြည့်ရအောင် on 20th August 2009, 4:08 pm
Registry ထဲမှာ ဘာတွေရှိသလဲ ဆိုတာကြည့်ရအောင်...
ဒီထဲမှာတော့ Extension Name ရဲ့ Setting တွေကို သိမ်းထားပါတယ်.(Jpg)
ဆိုတဲ့ File ဟာပုံဖြင့် အသိအမှတ်ပြုပြီး ဘယ်Program နဲ့
မဆိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကို မှတ်ထားပါတယ်..ဒါ့ကြောင့် (jpg) File ကို
ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Computer ဟာ Program တစ်ခုဖြင့်ဒီ (jpg) File
ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်..ဥပမာ (doc) File ကို Wordpad ဖြင့်ဖွင့်ပြီး (txt)
ကို Notepad ဖြင့်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်....
ဒီထဲမှာတော့ Login လုပ်ထားတာရှိပါတယ်...User ရဲ့ Setting တွေကို
သိမ်းထားပါတယ်..အကယ်၍ user တစ်ယောက်ပဲရှိရင် အထဲမှာရှိတဲ့ data
တွေဟာ[HKey_User] ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေနဲ့
တူညီပါတယ်...[HKey_Current_User]ဟာ login လုပ်ထားတဲ့ user က ပြုပြင်တဲ့
Windows Setting တွေကိုသိမ်းထားပါတယ်.ဒါ့ကြောင့် အခြား user ဖြင့် login
လုပ်ရင်တော့ settings တွေဟာ တူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး.
ဒီထဲမှာတော့ Hardware တွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Setting တွေကို
သိမ်းထားပါတယ်.ဥပမာ..CD Rom,Printer တွေရဲ့data နဲ့ Setting တွေ နောက်ပြီး
Bios ရဲ့ Setting တွေကိုပါ အထဲမှာ သိမ်းထားပါတယ်.
ဒီထဲမှာတော့ User တွေရဲ့ Setting တွေကိုသိမ်းထားပါတယ်.User
တစ်ယောက်ပဲရှိရင်တော့ [HKey_Current_User] နဲ့ [HKey_User/Default]ထဲက
data တွေဟာ တူညီပါတယ်.. User အများကြီးရှိရင်တော့ [HKey_Users] အောက်မှာ
User name ရဲ့ နာမည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Sub Key တွေရှိပါတယ်...
ဒီထဲမှာတော့ ယခုအသုံးပြုထားတဲ့ hardware setting တွေကို
သိမ်းထားပါတယ်.hardware setting အမျိုးမျိုးရှိရင်တော့
[HKey_Current_Config] နဲ့ [HKey_Local_Machine/config/current]ဟာ
လက်ရှိအသုံးပြုသည့် setting တွေကို သိမ်းထားပါတယ်...setting
[HKey_Current_Config] နဲ့ [HKey_Local_Machine/config/0001] တူညီပါတယ်.
3 Re: About Window Registery on 20th August 2009, 6:44 pm
4 regedit ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်5မျိုးအဓိပါယ် on 25th August 2009, 4:18 pm
---> လက်ရှိ Logon ၀င်ရ်ှအသုံးပြုနေသော User နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသည်။
---> လက်ရှိ User ၏ Folder များ၊Screen Color များ၊Control Panel Settings များကို ယင်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
---> Software များနှင့် ယင်း Software များကိုမည်ကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းဖော်ပြပေးသည်။
---> ယင်း Hight Level Key သည် HKEY_LOCAL_MACHINE Hight Level Key ၏ Sub Keyတစ်ခုဖြစ်သည်။
---> ယင်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များသည် Window Explorer အသုံးပြုပြီး ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို သင်ကဖွင့်လိုက်သည့်အခါ ယင်းဖိုင်နှင့်ပတ်သက်သော မှန်ကန်သည့် ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ရန်စီစဉ်ပေးသည်။
---> လက်ရှိ Active ဖြစ်နေသော Hardware Configuration များကိုဖော်ပြပေးသည်။
--->ယင်းသည် HKEY_LOCAL_MACHINE Hight Level Key ၏ Subkey နှစ်ခုဖြစ်သော Software နှင့် System တို့တွင်ပါဝင်သည့် Data များကိုထုတ်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
---> လက်ရှိ logon ၀င်နေသော User ၏ ID နှင့် log on Screen ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသည်။
--->ယင်း Hight Level Key တွင်ကွန်ပျူတာ ရှိ User အားလုံး၏ profile များကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။
--->HKEY_CURRENT_USER Hight Level Key သည် HKEY_USERS Hight Level Key ၏ Subkey တစ်ခုဖြစ်သည်။
--->0S စတက်ရန် အသုံးပြုသော Device များ၊Device Driver များနှင့်သက်ဆိုင်သော Data များ အပါအ၀င်ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သော Configuration Data အားလုံးကိုဖော်ပြပေးသည်။
--->မတူညီသော User များ log on ၀င်နေချိန်တွင်ယင်း Hight Level Key ရှိ အချက်လက်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမပေးနိုင်ပါ။
5 Re: About Window Registery on 25th August 2009, 6:05 pm
6 Re: About Window Registery on 25th August 2009, 6:37 pm
ဒါပေမယ့် ရေးသားပုံကွာလို့ ပေါင်းလိုက်တာပါ....
7 Re: About Window Registery on 26th August 2009, 4:00 am
အဲဒီ့ လောက်နဲ့ တင် ရပ် မထားကြနဲ့နော် .. ဆက်ရေးကြဦး .... ... သူ ရေး မယ် ငါ ရေးမယ် ဖြစ်နေဦးမယ် ... ဟီးဟီး .. နှစ်ယောက်လုံးလဲ ထပ် ပြီး ရေး ပေးကြပါ ခင်ဗျာ ...
8 Re: About Window Registery on 26th August 2009, 7:33 pm
9 Re: About Window Registery on 30th August 2009, 9:22 am
Registry ဖိုင်တွေကိုဘယ်မှာသိမ်းထားသလဲဆိုတော့ %System Root% \_System 32 \_ Config ဆိုတဲ
Folder မှာသိမ်းထားပါတယ်။%System Root% ဆိုတာက System ဖိုင်တွေမှာရှိတဲ Folder ကိုတာပါ။
Windows NT နဲ့ Windows 2000 မှာဆိုရင် Registry ဖိုင်တွေက C: \_ Windows \_ System 32 \_Config
ဆိုတဲ Folder အောက်မှာရှိမှာပါ။Windows OS ဟာ Registry ဖိုင်တွေကိုအလိုအလျောက် Backup
လုပ်ပေးတဲအပြင်မှတ်တမ်း (log)လည်းလုပ်ပေးပါတယ်။Backup လုပ်ထားတဲဖိုင်တွေကတော %System Root% \_Repair
ဆိုတဲ Folder မှာသိမ်းထားပါတယ်။
10 Re: About Window Registery on 30th August 2009, 9:24 am
Raw Binary Data ဖြစ်သည်။Hardware အများစုဧ။်သတင်းအချက်လက်များအားကွန်ပျူတာဉ် Binary Data
များအဖြစ်သိမ်းဆည်းမှတ်သားထားသော်လည်း Registry Editor တွင်ဖော်ပြရာဉ်အကျဉ်းဖော်ပြနိုင်ရန် Hexa
ကွန်ပျူတာဠ်4byte အရှည်ရှိသောဂဏန်းတစ်ခုအနေဖြစ့်သိမ်းဆည်းသည်။Device Driver များ၊Service များ
နှင့်သက်ဆိုင်သောသတ်မှတ်ကန်သတ်ချက်(Parameter) များကိုကျ၊် Data type ဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။Registry
Editor တွင်ဖော်ပြရာဉ် Binary သိုမဟုတ် Hexadecimal သိုမဟုတ် Decimal ပုံစံတစ်မျုိုးမျုိုးဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
အလျားသတ်မှတ်ချက်ပြောင်းလဲနိုင်သောအက္ခရာစဉ်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ပရိုဂရမ်တစ်ခုသိုမဟုတ် Service တစ်ခုက
Dataကိုအသုံးပြုသည့်အခါပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးသည့်ကိန်းရှင် (Variable)များသည်ယင်း Data type အမျုိုးစားတွင်
Multipe String အအမျုိုးစားဖြစ်သည်။User များကဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သည့်ပုံစံဖြစ့်တည်ရှိသောအက္ခရာများနှင့်ရောနှောနေသည့်
Hardware အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် Driver တစ်ခုအတွက် Resource list ကိုသိမ်းဆည်းရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Nested Arry တစ်
11 Re: About Window Registery on 30th August 2009, 4:04 pm
အားလုံးပဲ ရေးနိုင်သလောက်ရေးပေးကြပါ .. နောက်ဆုံး စာအုပ်လေးဘာလေး ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော် .. မဟုတ်ဘူးလား ဗျာ
12 Re: About Window Registery on 27th September 2009, 9:43 pm
သိပ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာ...အဲ...registry အကြောင်း ထပ်နေသလိုပဲနော်..အရင်ကနှစ်ခုတွေ့ မိသလိုပဲ thx for your post bro...
13 Re: About Window Registery on 28th September 2009, 6:25 pm
ကျွန်တော်တွေ့ တာတော့ ကိုထက်ရေးထားတာ တစ်ခုရယ် ကိုz3r0c00l ရေးထားတာရယ်..ကို မြိတ်အလုပ်သမားလေး ရေးထားတာပဲတွေ့တယ်ဗျ....Eng လိုတော့ရှာတွေ့ဘူး link လေးပေးပါလားဟင်...အခုမှဝင်ကာစဆိုတော့ မနှံ့စပ်သေးလို့ပါ...နောက်ပြီး...အစ်ကို registry အကြောင်းကိုဆက်ရေးပေးပါလား...ဖတ်လို့ကောင်းတယ်...
14 Re: About Window Registery on 29th September 2009, 3:31 am
အားလုံး ကို ပြန်ပေါင်းပေးထားလိုက်ပါတယ်ဗျာ .. အဆင် ပြေမယ်လို့  ထင်ပါတယ် ...
15 Re: About Window Registery on 30th September 2009, 7:22 pm
စကားမစပ်ဗျာ...ကျွန်တော့်ဆရာက reg ကိုလုံးဝဖျက်မရဘူးလို့ပြောပါတယ်.....တစ်ကယ်လည်းဖျက်မရပါဘူး..ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ဇ ကလေးကြောင့် ပါ reg ကို ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့များဖျက်လို့ရမလဲဟင်... ဟီး..အဲ့ဒါကိုဖျက်လို့ရခဲ့သည်ရှိသော် windows အတော်ကိုကွိုင်တက်သွားလားသိချင်လို့ပါ
16 Re: About Window Registery on 4th October 2009, 5:42 pm
အဲ ဒါ က တော့ ဖျက် ချင်တယ် ဆိုရင် c => window ထဲ က regedit ဆိုတာကို ဖျက် ကြည့် ပါလား ဗျ.. window ကို မတက်တော့ ဘူး ... အဲဒါ ကြီး က များတယ် ဆိုလည်း regedit ကို သွားပြီးတော့ အဲဒီ့ အထဲ က တစ်ခု ခု ကို ပဲ ဖျက်ကြည့်ပါ ဦးလား ... စမ်းကြည့်ပေါ့နော်.....
17 Re: About Window Registery on 4th October 2009, 6:54 pm
ကျွန်တော်စမ်းဖူးတယ်ဗျာ....ဒါပေမယ့် reg ကို windows က backup လုပ်ထားပြီးတော့ ပြန်၂ ပေါ်လာတယ်....ဖျက်လို့ရဘူး
18 Re: About Window Registery on 6th October 2009, 3:38 am
အဲဒါ ဆိုရင် တခြား window တစ်ခု ကနေပြီးတော့ regedit ကို export ထုတ် ပြီးတော့ ကိုယ့် regedit မှာ import လုပ်ကြည့် ပါဦး .. ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း စက်တော့ တခါတည်း window ပြန်တင်လိုက်ရတယ် ဗျ .. စမ်းကြည့်ပါဦးလား .. ဟီး ..
19 Re: About Window Registery on 15th October 2009, 10:08 am
ဘယ်လိုဘဲရေးရေး အနော်တို့ကတော့ အားပေးနေမှာဘဲ
20 Re: About Window Registery